Ogaden News Agency (ONA) – ShilaboNews – Gabdhaha OGADENIA Vs Halganka OGADENIA
ShilaboNews – Gabdhaha OGADENIA Vs Halganka OGADENIA
Posted by ONA Admin	/ July 22, 2014
Tan iyo intii uu biloowday dagaalka hubaysan ee lagu raadin hayo xoriyada OGADENIA waxaa si aad ah ooga dhex muuqda meel kasta oo uu jiro abaabul dhinaca halganka ah Gabdhaha OGADENIA ayagoo aad arkayso mararka qaar inay dooor muhiim ah ka qaataan abaabulka bulshada. Waxaan xasuusanaa haweenaydii uu ka shihiiday halgamaagii somaaliyeed ee AXMED GURAY inay ahayd gabadhii ku boorisay NUUR IBNU MUJAAHID inuu soo celiyo dhulkii Somaaliyeed ee xabashtu dib u laba qabsatay, wuxuuna fuliyay taladii BAATIDAL WAAN BARA ee ahayd inuu soo celiyo dhulka kii Somaaliyeed. Gabdhaha OGADENIA ayaa ah kuwa ilaa iyo maanta tir tiris iyo abaabul ku wada raga Ogadeniya, Si ay usoo celiyaaan dhulka Ogadeniya.
Taasi mid lamida, gabdhaha OGADENIA ayaa magacyo kala duwan u yaqaaana raga aan ka qayb qaadan halgan ka ayagoo ugu yeedhaya erayo ay ku jirto tir tir siinyo, waxaana ka mida ISKANOOLE, taas oo mic naheedu tahay waad iska nooshahay faa’iidana ma lihid. Sidoo kale Gabdhaheena OGADENIA waxaa astaan u ah geesinimo ay dheeer yihin gabdhaha (dhigooda ah ee) Somaaliyeed ee ku dhaqan aduunka kale waxayna ka qayb qaateen dagaalka ka socda gudaha OGADENIA ayagoo si toos ah u galay dagaalada ka socda OGADENIA.
Gabdhaheena wax yaaalaha cajiib ka ah ee lagu arkay waxaa kamid ah ayaga oo aan NIN ahaan u tixgalin qofka aan kaqayb qaadan halganka hubaysan ee lagula jiro XABASHTA.
Gumaysiga itobiya oo ah mid kusoo duulay sharafta karaamada iyo sumcada shacabka Somaaliyeed oo dhan ayaa waxa uu ku guulaysan waayay inuu hirgaliyo qorshihii uu watay oo ahaa inuu badalo dhaqanka iyo karaamada gabdhaha OGADENIA si ay isu dhex galaaan bulshada kale ee XABASHTA.
(Halkan Ka Akhri)